ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထိရောက်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး?? - Yangon Media Group
ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထိရောက်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး??
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထိရောက်အောင် မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၂ဝ၃ဝ မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပ ပျောက်ရေးဆိုတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ဟာ အောင် မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဒုတိယ သမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကပြော ကြားခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်း နေပြည်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည် မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အခမ်း အနား၌ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားရာတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူက ”ငတ်မွတ်ခေါင်း ပါးမှုနဲ့ အာဟာရချို့တဲ့မှုဟာအချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျ ဆင်းခဲ့ပြီးမှ ယခုတစ်ဖန်ပြန်လည် မြင့်တက်လာပြီး မိမိတို့ကမ္ဘာလူမှု အဖွဲ့အစည်းကို ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပဋိပက္ခတွေ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ စီးပွားရေးကျ ဆင်းမှုတွေ၊ တန်းတူရည်တူမရှိမှု တွေ စတဲ့အကြောင်းတရားတွေ ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငတ် မွတ်ခေါင်းပါးမှုပပျောက်ရေးဆို တဲ့ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေး ဟာ အရင်ကထက်ပိုမိုခက်ခဲမယ့်ပုံ ပေါ်နေပါတယ်၊ ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အမှတ်စဉ် (၂) ပြည့်မီရေးအတွက်၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူသားတို့ငတ် မွတ်ခေါင်းပါးမှုကင်းစင်ရေး အ လေးပေးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ် ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အ စည်းများမှလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်သလို မိမိတို့အနေနဲ့လည်းဝိုင်း ဝန်းကြိုးပမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထိရောက် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၂ဝ၃ဝ မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပပျောက်ရေးဆိုတဲ့ တစ်ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ဟာ အောင် မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာ အောင်သူက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ”စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနဲ့ ဆည်မြောင်ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဘေးကင်းရေးနဲ့ ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်တွေကို မျက်ခြည်မပြတ် ဆောင်ရွက်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ ရေးကို ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ မိမိတို့နိုင်ငံ လူဦးရေနဲ့စိုက်ပျိုး မြေအကျယ်အဝန်းအရ ဖူလုံပိုလျှံ နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ ပြည်ပသို့ ဆန်မက်ထရစ်တန်ချိန် (၃ ဒသမ ၅၁၈)သန်းကျော်တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် နှစ်ပေါင်း(၇ဝ)ကျော်အတွင်း ဆန်တင်ပို့မှုစံချိန် ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ယင်းအပြင် ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ငါးတန်ချိန် (၅ ဒသမ ၇) သိန်းမက်ထရစ်တန်တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပြီး နှစ် (၂ဝ) အတွင်း ပြည်ပသို့ ငါးတင်ပို့မှုစံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသားတင်စိုက်ပျိုး မြေဧရိယာစုစုပေါင်းဧက (၃၃ ဒသမ ၁ဝ)သန်းရှိပြီး သီးနှံအမျိုး ပေါင်း (၆ဝ)ကျော်ကို သုံးရာသီစလုံး စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါကြောင်း၊ နှစ်စဉ် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးရာသီ တွင် သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးပမာဏမှာဧက(၅ဝ ဒသမ ၅၃)သန်းဖြစ် ကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ စီပွားရေးမှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးဟာ အဓိကဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ဂျီဒီပီ၏(၂၅ ဒသမ ၆)ရာ ခိုင်နှုန်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါ ကြောင်း၊ သီးနှံများ၏ တစ်ဧက ထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးအပြင် သီးထပ်သီးညှပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်နှင့် စက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် ဆည်ရေသောက်စနစ်များ အပေါ်အခြေခံသည့် အဆင့်မြင့် လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးလုပ် ငန်းများကိုလည်း ပြည်ပအကူအညီ၊ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နှင့် သမဝါယမအသင်းအဖွဲ့များဖြင့်အစွမ်းကုန်ဖော်ထုတ် ပေးလျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၉၂၃၁၅)ဧက ဖော်ဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိ က္ခာအဖွဲ့ကြီး၏ စစ်တမ်းအရ အာ ဟာရချို့တဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ အသုံးစရိတ်မှာ(၃ ဒသမ ၅) ထရီ လီယံရှိပြီး ကမ္ဘာ့မွေးကင်စကလေး ငယ်သေဆုံးမှုရဲ့ (၄၅ ရာခိုင်နှုန်း)ကျော်ဟာ အာဟာရချို့တဲ့မှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါကြောင်း၊ မိမိတို့ အားလုံးဟာလည်း အာဟာရပြည့် ဝရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ ရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးလုပ်ငန်း များကို ကျွဲကူးရေပါဆိုသလို အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်း နေအရွယ်ကလေးငယ်များ ကျန်း မာကြံ့ခိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍အ ခြေခံညာကျောင်းများတွင် နို့ တိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ်များကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ရာ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင်နှစ် အတွက် ကျောင်းသားကျောင်း သူဦးရေ လေးသိန်းကျော်ကို နို့ တိုက်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဗာမေလန်၏ ဒဏ်ရာကြောင့် ဗဟိုခံစစ်တွင် ဘာစီလိုနာ အားနည်းနေ
မိခင် ဆင်မကြီး သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သည့် သုံးနှစ်အရွယ် ဆင်မလေး ပွင့်နဒီကျော်အတွက် စေတနာရှင်သ??